Maalgalin lagu samaynayo internet raqiis ah Afrika - BBC News Somali
Maalgalin lagu samaynayo internet raqiis ah Afrika
21 Maarso 2012
Teleefoonka gacanta ee mobilka ayaa isbadalwayn ku sameeyay Afrika, in kabadan kala bar dadka Afrika ayaa hadda haysata telefoon. Laakiin waxaan wali aysan helin Afrika Internet ku filan oo dhaqso badan. Maalgashatada caalamka ayaa hadda maalgalinaya internet dhaqso badan oo raqiis ah inay Afrika u sameeyaan.
Hayadda Swift ee maamusha lacagta ay bangiyada adduunka isku diraan ayaa joojisay Sabtidii in Bangiyada Iran ay diraan lacag ama loo soo diro.
Talaabadan ay qaadayso hayadda Swift ayaa loogu tala galay in lagu cunaqateeyo bangiyada Iran si Iran ay u joojiso barnaamishkeeda Nukliyeerka.
Hayadda Swift ayaa sheegtay in cadaadis badan aysaareen Maraykanka iyo Midowga Yurub si loo joojiyo in Bangiyada Iran inay lacag si electaroonic ah u helaan ama u diraan.
Sida ay u shaqayso Swift iyo saamaynta ay Iran ku yeelan doonto cunqabataynta bangiyadeeda la saaray ayaan ka waraysanay Jamaal Cali Xusein oo ah gudoomayaha bangiga Citi Bank ee Tanzania.
Teleefoonka gacanta ee mobilka ayaa isbadalwayn ku sameeyay Afrika , in kabadan kala bar dadka Afrika ayaa hadda haysata telefoon. Laakiin waxaan wali aysan helin Afrika Internet ku filan oo dhaqso badan. maalgashatada caalamka ayaa hadda maalgalinaya internet dhaqso badan oo raqiis ah inay Afrika u sameeyaan.
Maalgalinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika
Shir looga hadlaayay maalgalinta kaabayaasha dhaqaalaha ee geeska Afrika ayaa toddobaadkii hore ka dhacay Nairobi.waxa axooga la saaray mashruucyada biyaha, korontada iyo jidadka.
Bishan horaanteeda ayaa la bilaabay dhisida dekada Lamu ee Kenya oo ay ku baxayso lacag dhan 23 bilyan oo dollar oo lagu dhisaayo dekad iyo warshad sifaysa shidaalka iyo dhuumo qaada shidaalka, jid tareen, iyo jidad waawayn oo ku xiraayo dekada Lamu Koonfurta Sudan iyo Itoobiya.
Shirka looga hadalay maalgalinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa Somaliland uga qayb galay Eng Xuseen Cabdi Cali oo ah maareeyeku xigeenka hay'adda waddooyinka. Wariyaha BBCda axmed saciid Cige ayaa ka waraystay waxyaabihii shirka looga hadlay.